apple & apos; s ipad mini (2019) iri kutengeswa pamusi waro chando 2020 kutanga mutengo zvakare
Kuru Nhau & Ongororo Apple & apos; s mini mini (2019) iri kutengeswa pamutengo wayo weChishanu Chishanu 2020 kutanga mutengo zvakare
Zvekutengesa zvakaburitswa makore matatu nehafu mushure meyechina-gen iPad mini, Apple & apos; s ichangoburwa piritsi. inogona kukwidziridzwa munguva pfupi ne chiratidziro chakakura , anonyanya kusviba bezels, uye mu-screen Kubata ID yeminwe yekuziva tekinoroji padhiketi pakati pevamwe.
Kusvikira izvo zvaitika (kana ndodakanazvinomboitika), 2019 & apos; s mini mini 5 ichiri kunzwa senge inomanikidza kwazvo kukosha kweavo vanhu vasingafungire & apos; echinyakare 'dhizaini ine miganhu mikuru yakatenderedza kirasi 7.9-inch pani, yakanaka yechinyakare kumberi- yakaiswa chigunwe chigunwe sensor yakapetwa kaviri sebhatani repamba, uye yakajairwa 7MP selfie kamera.
Kazhinji inotengeswa pamadhora 399 zvichikwira, iyo Apple A12 Bionic-powered slate parizvino iri kutengeswa nemari shoma seUS $ 334.99 isina tambo dzakabatanidzwa. Kana iwe uchimhanyisa, Amazon inogona kutovimbisa yako yakadzikiswa zvakanyanya iPad mini (2019) ichasvika pamberi Zuva reValentine & apos , asi zvinosuruvarisa, iyo snazzy yegoridhe inonaka iyo inowanzo kuve yakakurumbira nguva ino yegore ichiri kunyorwa pamutengo wayo wenguva dzose wekutanga.
Izvo zvinosiya vatengesi vekutenga murudo nemapendi-akakurisa mapiritsi ePOSOS anofanirwa kusarudza pakati pesirivheri uye nzvimbo grey pendi mabasa kusvika padanho rekupinda-chikamu 64GB yekuchengetera inowanika pane zvambotaurwa 16 muzana kuderedzwa kuri kunetsekana.
Isu & apos; zviri pachena kuti tiri kutaura pamusoro peWi-Fi-chete misiyano ine simba zvine musoro, inogara kwenguva refu, uye inopinza zvinoshamisa 7.9-incher pano, uye kana iwe & apos; tiri kushamisika, iyi mhondi chibvumirano chitsva chinoenderana neyechishanu-gen iPad mini & apos; s yose-nguva yakaderera mutengo poindi yakanyoreswa kumashure paChishanu Chishanu yemuenzaniso 64 gig isina rutsigiro rweLTE.
Kutaura nezvazvo, unogona kunyadziswa kunzwa kuti slate-inogoneswa nemagetsi inongotaridzwa pasi ne $ 26.45 munzvimbo ine grey hue ine 64GB yemuno imba yekudyara uye kunyange zvishoma kusvika kune mamwe mavara sarudzo uye iyo 256 gig yekusiyanisa yakasarudzika iri kunetsekana. . Zvichakadaro, ese asiri-LTE 256GB mamodheru ari kutengeswa pamazana makumi maviri emabhuru pasi penguva dzose, inova ... zvishoma zvirinani kupfuura chero chinhu.
apple tarisa zviri mubhokisi
ZVAKAITWA: AT & T & apos; s 3G MicroCell saiti iri kumusoro uye iri kushanda
HP Elite X3 vs iPhone 6s Plus vs Samsung Galaxy Note 5 vs Nexus 6P uye iyo yakasara: saizi kuenzanisa